Tillerson: Waxaa naga go’an in la burburiyo kooxda Dowladda Islaamka - BBC News Somali
Tillerson: Waxaa naga go’an in la burburiyo kooxda Dowladda Islaamka
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegaya in muhiimadda koobaad ee dowladdiisu ka leedahay gobolka Bariga Dhexe ay tahay in la burburiyo kooxda la baxday Dowladda Islaamka.
Tillerson ayaa hadalkan ka jeediyay shirka waddamda ku bahoobay la dagaalanka kooxdani, waxa uuna sheegay in maamulka madaxweyne Trump ay ka go'antahay in la baabi'iyo kooxdan Dowladda Islaamka, balse ma uusan shaacin qorshe cusub oo ku wajahan arrintan.
Rex Tillerson ayaa xubnaha isbahaysigan uu ka kooban yahay u sheegay in Mareykanka uu diyaar u yahay in uu u awood sheegto isla markaana uu joogteeyo dagaalka ka dhan ah kooxdan Dowladda Islaamka.
Basle ma uusan soo jeedin qorshe cusub oo ku aadan arrintan marka laga reebo in uu muujiyay xoojinta doorka milatari ee Mareykanka ee uu ku taageerayo xoogagga muxaliga ah, si ay kooxdan uga saaraan goobaha ay ku xoogan tahay ee ay ka taliso.
Rex Tillerson ayaa qiray in siyaasadda xukuumadda Washington ee ku wajahan Suuriya ay wali tahay mid laga shaqeynayo, mana uusan caddeyn in arrintaa ay ka dhigan tahay in la sameeyo aag nabdoon oo ay ilaaliyaan ciidamada isbahaysigan, arrintaa oo uu milatariga Mareykanka horey u diiday.
Waxa uu intaa ku daray in dhaqaalaha isbahaysigan diiradda lagu saari doono sidii looga hortagi lahaa in kooxdan la abxday Dowladda Islaamka ay dib isu soo abaabusho.
Kaddib hawlgalka milatari ee ka dhanka ah kooxdan ayaa saraakiishu waxa ay rajeynayaan in shakhsiyaadka ka badbaaday kooxdan ay diiradda saari doonaan weerarro argagixiso oo dheeraad ah halka ay difaacan lahaayeen deegaanadooda.
Weerarkii ka dhacay London ayaa sidoo kale lagu soo hadal qaaday shirkan, waxaana xoghayaha guud ee gaashaan buurta NATO uu sheegay in mar kastaa ay halis ugu jiraan weerarada noocan oo kale ah.
Tillerson ayaa ku nuux-nuuxsaday muhiimadda in la xoojiyo sirdoonka iyo in la wadaago xogaha mukhaabaraadka iyo sidoo kale in la xoojiyo dedaallada looga hortagayo faafitaanka aragtiyada xagjirniinta ee baraha intarneedka.